Ipateni89: Ukuthengisa isoftware yeAI kwintengiso yakho yedijithali | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 21, 2019 NgoLwesihlanu, ngoJuni 21, 2019 Douglas Karr
Kwiminyaka emibini emva kokuqala kwabo kwi studio sokuzibandakanya Alfa ePhakamileyo, Ipateni ye-AI yokuthengisa ye-AI ikhulula ngokukhawuleza ii-automation ezintsha ze-Facebook, i-Instagram kunye neentengiso zikaGoogle.
Isoftware yentengiso ye-AI yePateni89 Idibanisa amandla okufunda komatshini kunye nedatha yomthengisi engazange ibonwe. Ichonga kwaye ihlalutye iipateni zedatha eya kuphucula iziphumo zomkhankaso. Olu hlalutyo lwedatha oluqhubekayo ligcina intengiso yedijithali yentengiso ihlaziyiwe kwaye yonyuselwe ukusebenza.
Ngokumiliselwa kweqhosha labo elithi "Ndenzele Oku", i-Pattern89, yenza ukuba intengiso yedijithali ibe lula kwaye ikrelekrele- kunangaphambili. Iimpawu zayo zibandakanya:
Ukuqonda kweNtengiso yoLuntu
I-AI yePateni89 ibonelela abathengisi ngeyona nto ibalaseleyo ukuqonda kwentengiso yoluntu kuba inokufikelela kweyona datha ininzi. Yonke imihla, ihlalutya ngaphezulu kwe-2,900 yezinto zayo yonke intengiso yabathengi, ecaleni kwezigidigidi zamanye amanqaku edatha. Olu hlalutyo olunzulu, lwemihla ngemihla lujongana nolona hlaziyo lufanelekileyo nolufike ngexesha kwiintengiso zikaFacebook nezikaGoogle.
Ulungelelwaniso luThunyelwe njengeZilumkiso
I-AI ifumana iipateni ezibalulekayo kwidatha yomthengisi, kwaye ichonge indlela yokusebenzisa ezo patheni ukwandisa intsebenzo yentengiso. Ihambisa olu hlaziyo kubathengi njengezilumkiso zemihla ngemihla, ukuze basoloko benentengiso ezivelisa ezona ziphumo zibalaseleyo.
The UMcwangcisi woyilo Uhlalutya amawaka ezinto ezibonwayo kwintengiso nganye kwaye ichonge ukuba yeyiphi imiba yoyilo- kubandakanya ikopi, imibala, imifanekiso, imbonakalo yobuso, kunye nokuninzi- isusa uninzi kubaphulaphuli ukufikelela kwiinjongo zesiko.
Kwindlela yokugcina abathengisi nangakumbi ixesha, uPateni89 usandula ukumilisela eyaboNdenzele Oku”Iqhosha. Isebenza ngokuzenzekelayo ilungiselelwe kwangaphambili enokuthatha iiyure ngeveki ukuyigqiba.
Zombini iimveliso kwaye arhente Ukufumana impumelelo ngeqonga labo le-AI labathengisi, Ipateni89 ibonelela ngesimahla iiveki ezimbini.
Qalisa ukulingwa kwakho simahla
tags: IntengisoUvavanyo lweentengisoaikukubhadla okungeyonyaniintengiso yedijithaliulingo lwentengiso yedijithaliimifuniseloI-alpha ephezuluoktivisixaubungakanani